धावनमार्गका अंक र अर्थ
भदौ १, २०७६ | हेमन्त अर्ज्याल
हामी चराचुरुङ्गी कति सहज तरिकासँग उड्छन् भन्ने कुराले चकित पर्छौं । उनीहरूका लागि उड्नु भनेको हाम्रा निम्ति हिंड्नु, दौड्नु, उक्लनु र ओर्लनु जस्तै प्राकृतिक क्रिया नै भयो । बरू हवाईजहाज चढेर आकाशमा उडी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जाने हाम्रो काम नितान्त अप्राकृतिक हो । कुनै पनि मानिसलाई आकाशमाथि उडेको हवाईजहाजले आफूतर्फ आकर्षण गर्छ नै, छोटो अवधिकै लागि भए पनि । यहाँ उडान सम्बन्धित यस्तै साधारण, साना–मसिना कुरो जानकारी गराउने प्रयास गरिनेछ ।
एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जाँदा कुन दिशातर्फ लाग्नुपर्छ भन्ने कुरो सबैभन्दा पहिले निक्र्योल गरिन्छ । मोटामोटी रूपमा हामी फलानो ठाउँदेखि उत्तर, पूर्व, दक्षिण वा यस्तै भनेर गन्तव्यको ठेगान गर्छौं । तर हवाईजहाजको यात्राका निम्ति त्यतिले मात्र पुग्दैन । त्यसको लागि कम्पास (Compass) कै प्रयोग गर्नुपर्दछ । एउटा कम्पासको पूरा वृत्त (Circle) ३६० डिग्री या भागमा बाँडिएको हुन्छ । शून्य डिग्री (ण्ण्) ले उत्तर दिशा जनाउँछ । त्यसको ९०० मा पूर्व (घडीको सुई घुमाइ अनुसार), पूर्वभन्दा अर्को ९०० (उत्तरबाट ९०+९०=१८००) मा दक्षिण, त्यहाँबाट थप ९०० (१८०+९०=२७००) मा पश्चिम र अर्को थप ९०० (२७०+९०=३६००) मा पुनः उत्तर अथवा शून्य (००) डिग्रीमै आइपुगिन्छ । भन्नाले; उत्तर भनेको ०० या ३६०० दुवै हो । कम्पासको गोलो अथवा वृत्तको यस किसिमको भागबण्डालाई Whole Circle Bearing (WCB) भनिन्छ र छोटकरीमा ‘बियरिङ’ मात्र ।
हवाईजहाजलाई उड्नको लागि धावनमार्ग (Runway) नभई हुँदैन । धावनमार्गमा वेगले गुडेपछि मात्रै यसले जमीन छोडेर आकाशको मार्ग समात्न सक्ने हो । तर धावनमार्ग जहाँ पायो, जस्तो पायो गरेर बनाउन मिल्दैन । सानो विमानको लागि पनि समतल अथवा हल्का भिरालो खुला जमीन वा कम्तीमा तीन–चार किमी गोलाइको उपत्यका जरूरी हुन्छ । धावनमार्ग कच्ची वा पक्की जे पनि हुन सक्छ, तर त्यो सोझे, सम्म र केही चौडा चाहिं हुनैपर्छ । हरेक धावनमार्गका दुईतर्फका टुप्पोमा दुई अंकको नम्बर लेखिएको हुन्छ । यो अंकले धावनमार्गको दिशा बताउँछ । काठमाडौंको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्गको दक्षिणपट्टि ‘०२’ र उत्तरतर्फ ‘२०’ लेखेको पाइन्छ ।
विमानस्थलको धावनमार्गमा कुन दिशा कता हो भन्ने जनाउन धावनमार्गको दुवै छेउमा लेखिने अंकको जोडी यस्तो हुन्छः
एवं रितले १८ देखि ३६ सम्मका संकेत अंकले धावनमार्गको अवस्थिति (दिशा) जनाउँछन् ।
काठमाडौं विमानस्थलकै दिशा संकेत (०२–२०) को कुरा गरौं । कम्पासको वृत्तांश (WCB) को आधारमा भन्दा ०२ भनेको ०२०० डिग्री हुन आउँछ । त्यो भनेको उत्तर (००) बाट दायाँपट्टि बढ्दै जाँदा २०० (०२०) पूर्वतिर भन्ने हो । त्यस्तै दक्षिणपट्टिको २० भनेको खासमा २००० हो । अर्को हिसाबले हेर्ने हो भने ०२० मा १८० जोड्यो भने २०० हुन आउँछ । अर्थात् दुवैतर्फको धावनमार्गको नम्बरको भिन्नता जहिले पनि १८० डिग्री नै हुन आउँछ । यसलाई अझै छोटकरीमा भन्दा १८०० को पछिल्लो शून्य पनि छोडिन्छ र धावनमार्गका दुई विन्दुको फरक १८ मात्रै हुन्छ । यो हिसाब अनुसार यदि धावनमार्गको टुप्पो ०१ छ भने अर्कोतर्फ १९ हुनैपर्छ । त्यस्तै ०३ छ भने अर्कोतर्फ २१ हुनैपर्छ । ३६ छ भने अर्कोतर्फ १८ हुनैपर्छ ।
विमानस्थलका धावनमार्गको लम्बाइ–चौडाइको भने निश्चित अंक तोकिएको हुँदैन । धावनमार्गको लम्बाइ कुन आकारका जहाज ओराल्ने–उडाउने भन्नेमा निर्भर गर्छ । अर्थात् यसको लम्बाइ प्रयोग गरिने हवाईजहाज सुहाउँदो हुनुपर्छ । सानो जहाजलाई छोटो र ठूलोलाई लामो धावनमार्ग आवश्यक पर्दछ । छोटो धावनमार्गमा उड्न सक्ने जहाज (Short Take-off and Landing) लाई छोटकरीमा ‘स्टोल’ (STOL) विमान भन्ने गरिन्छ । ट्विन ओटर (Twin-otter) तथा ड्रोनियर (Dornier) त्यस्ता विमान हुन् ।
धावनमार्ग बनाउँदा ध्यानमा राख्नुपर्ने एउटा महत्वपूर्ण कुरा हो– त्यस क्षेत्रमा अक्सर चल्ने हावाको दिशा । कुनै पनि जहाज सम्भव भएसम्म हावा चल्ने विपरीत दिशाबाट उड्ने र ओर्लने गर्दछन् । तर त्यस्तो अनुकूल मिलेको जमीन सबैतिर सधैं पाउन सम्भव हुँदैन । काठमाडौंको त्रिभुवन विमानस्थल रहेको ठाउँको प्रकृति हेर्दा त्यहाँ ०२/२० भन्दा अर्को दिशातर्फ फर्काएर (Orientation) धावनमार्ग बनाउन सम्भव भएन । काठमाडौंमा बहने हावाको दिशा प्रायशः पूर्व–पश्चिम हुने गर्दछ । तर गौचरमा उपलब्ध जमीनमा पूर्व–पश्चिम हुने गरी धावनमार्ग बनाउन संभव थिएन । पुरानो गौचर विमानस्थलको धावनमार्ग पूर्व–दक्षिणबाट उत्तर–पश्चिम (३४/१६) ढल्किएको थियो र लम्बाइ ४००० फिटभन्दा पनि कम थियो । त्यस जमानाको डेकोट (Dakota/DC3) लाई पनि यो पुगेस् पुगेस् हुन्थ्यो, ठूलो जहाज त त्यसबाट उड्ने/ओर्लने कुरै हुँदैनथ्यो । पुरानो धावनमार्ग अनुकूल नभएको कारणले नै त्यसको दिशा समेत बदलेर ३०५० मीटर लामो हालको नयाँ धावन मार्ग (०२–२०) बनाइएको हो । सुरक्षाको दृष्टिले अझ् पनि यसको लम्बाइ अपुग भएकोले अहिले धावनमार्गलाई ३०० मीटर दक्षिणतर्फ विस्तार गरिंदैछ ।
विमानस्थलको धावनमार्ग (रन–वे) र जहाज अड्याइने ठाउँ (Parking) जोड्नका निम्ति कम्तीमा एउटा ट्याक्सी–वे (Taxi way) चाहिन्छ । खासमा धावनमार्गको लम्बाइ अनुसार ‘ट्याक्सी–वे’ को संख्या निर्धारण हुन्छ । लामो धावनमार्ग भए धेरै वटा ट्याक्सी–वे हुन्छन् । काठमाडौंमा रन–वेको दुवै पुच्छरसम्म ट्याक्सी–वेले नजोडेकोले उडान र अवतरणमा धेरै समय खेर जाने गरेको छ ।
यसबाहेक, हवाईजहाज उडाउन र ओराल्न विमानस्थलको तापक्रम र हावाको चाप (Atmosheric pressure) को भूमिका पनि उत्तिकै हुन्छ । एउटै तौलको हवाईजहाज जाडोमा छोटो दूरीबाटै उड्न सक्छ भने गर्मीमा त्योभन्दा लामो दूरीसम्म नगुडी उड्न सक्दैन । यसको कारण– हावाको घनत्व (Density) जाडोमा बढी र गर्मीमा कम हुनु हो ।
हवाई संचार प्रणाली
कुनै पनि जहाजले इन्जिन चलाउनु अगाडि विमानस्थलको नियन्त्रण कक्ष (कन्ट्रोल टावर) सँग स्वीकृति लिनुपर्दछ । यसनिम्ति विमान र टावरबीच भीएचएफ (Very High Frequency) प्रविधिको रेडियोमा कुरा गरिन्छ । यो भनेको नेपालमा हाल प्रचलनमा रहेका एफएम रेडियोको फ्रिक्वेन्सी ८७.५–१०८ मेगाहर्ज (87.5-108 MHz) भन्दा माथिल्लो ब्याण्ड (Band) हो । यस्तो फ्रिक्वेन्सी ब्याण्डलाई एअर ब्याण्ड AIR Band) पनि भनिन्छ र यो १०८–१३७ मेगाहर्जभित्र पर्दछ । त्यसमध्ये १०८–११७.९५ मेगाहर्जसम्मका ब्याण्डहरू केवल हवाई नेभिगेसन (Navigation) यन्त्रहरूको लागि सुरक्षित गरिएको हुन्छ । ११८ देखि १३७ मेगाहर्जसम्मका ब्याण्ड भने प्रत्यक्ष कुराकानीको लागि छुट्याइएका हुन्छन् । यो अन्तर्गत पनि, आपत्कालीन वेला वा सुरक्षा तथा अन्य आवश्यक सेवाको लागि छुट्टाछुट्टै फ्रिक्वेन्सी निर्धारण गरिएको हुन्छ, ताकि एउटामा कुरा गर्दा अर्कोमा व्यवधान नआओस् ।
हवाई तथा समुद्री बाटो नाप्न नटिकल माइल प्रयोग गरिन्छ। यो सामान्य माइल भन्दा करीब १५ प्रतिशतले बढी हुन्छ। यस अनुसार १ नटिकल माइल बराबर ६०८० फिट हुन्छ।
भीएचएफ प्रणालीमा कुरा गर्न आँखाले वा दूरवीनले प्रत्यक्ष देख्न सकिने व्यवधान रहित (Live of Sight) अवस्था हुनु जरूरी हुन्छ । अथवा, देखिने ठाउँहरूबीच मात्र यो फ्रिक्वेन्सीबाट कुरा गर्न मिल्छ । यसलाई सानो पहाडी ढिस्कोले पनि व्यवधान पुर्‍याउन सक्छ । उदाहरणको लागि लुक्ला र काठमाडौंबीच भीएचएफमा सीधै कुरा गर्न सकिंदैन । त्यसको लागि एचएफ (High Frequency/Short Wave Radio) नै आवश्यक पर्दछ । तर काठमाडौंबाट उडेको जहाज धेरै माथि उँचाइमा पुगेपछि वा लुक्लालाई छेक्ने लामजुरा (Lamjura) डाँडाले नरोक्ने हो भने भीएचएफमा स्पष्ट सम्पर्क गर्न पनि सकिन्छ । सिमरा र काठमाडौंको कुरो पनि त्यस्तै हो ।
कुनै दुई स्थानबीचको दूरी वा बाटोको लम्बाइ मापनका विभिन्न तरिका छन् । अहिले हाम्रो चलनचल्तीमा ‘माइल’ र ‘किलोमिटर’ छन् । खासमा माइल (Mile) भनेको स्टाटस माइल (Status Mile—SM) हो । यो भनेको ५२८० फिट हो । एक माइल बराबर १.६ किलोमिटर हुन्छ । तर हवाई तथा समुद्री बाटो नाप्न नटिकल माइल (Nautical Mile—NM) प्रयोग गरिन्छ । यो सामान्य माइल (SM) भन्दा करीब १५ प्रतिशतले बढी हुन्छ । १ एनएम=१.१५१५ एसएम । यस अनुसार १ नटिकल माइल बराबर ६०८० फिट हुन्छ । नटिकल माइल निर्धारणको सूत्र पृथ्वीको केन्द्रसँग गाँसिएको छ । पृथ्वीको सतहको एउटा सोझे रेखा जसको दुई टुप्पालाई पृथ्वीको केन्द्रसँग जोड्दा एक सेकेण्ड बराबरको कोण बन्छ । त्यो नै एक नटिकल माइल हो । यदि, मानौं त्यस्ता कोण १० (एक डिग्री) बराबर भयो भने पृथ्वीको सतहमा हुनुपर्ने सोझे धर्कोको लम्बाइ ६० नटीकल माइल हुन्छ । यसैबाट पृथ्वीको वृत्त (circumference) को हिसाब गर्ने हो भने ६०x३६०=२१,६०० नटीकल माइल अथवा झण्डै २५,००० माइल हुन आउँछ । धेरैलाई थाहा छ, १ डिग्री बराबर ६० मिनेट र १ मिनेट बराबर ६० सेकेण्ड हुन्छ । यो समय सम्बन्धी सेकेण्ड भने होइन । यस किसिमको मापन विधिले लामो दूरी पार गर्ने पानीजहाज वा हवाईजहाजलाई गन्तव्य पहिल्याउन सजिलो पार्छ ।
अगाडि हामीले कम्पास (Compass) को कुरा गर्‍यौं, तर विचार गरौं, के उडान गर्दा नक्शामा कोरे जस्तै गर्न सम्भव हुन्छ त ? उडिरहेको वेला कसरी थाहा पाउने कुन ठाउँमाथि पुग्यौं भनेर ? अनि उडान बाटोको दूरी केले कसरी नाप्छ, कसरी थाहा हुन्छ ? अँध्यारोमा उडान दिशा कसरी पहिचान गरिन्छ ? यी सबै कुराबारे पछि थप स्पष्ट पार्दै जाउँला !
सिभिल इन्जिनियर अर्याल हवाई उडानका सौखिन–अध्येता हुन् ।